डाक्टर केसी जस्ले बच्चालाइ जन्म दीइन र आफै संसारबाट सधैका लागि बिदा भइन ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/डाक्टर केसी जस्ले बच्चालाइ जन्म दीइन र आफै संसारबाट सधैका लागि बिदा भइन !
चितवनको भरतपुर अस्पतालमा एक सुत्केरी महिलाको निधनको विषयमा तनाव सिर्जना भएको छ । अस्पतालको लापरबाहीले महिलाको निधन भएको भन्दै पीडित परिवारले आपत्ति जनाएका छन् । केहि दिन अगाडी गोरखा जिल्ला पालुङटार–९, मिर्काेट घर भएकी हाल सोलुखुम्बु जिल्लामा सेवारत २४ वर्षीया कल्पना केसीको सुत्केरीको लागि भएको अप्रेसनपछि पेटमा थप पीडा हुँदा अकालमा ज्या’न गएको हो ।
दुखाइ निकै भएपछि नर्सहरुलाई निकै अनुरोध गरेपछि तीन घन्टासम्म पनि नर्सबाट डाक्टरलाई खबर नहुँदा सुत्केरीको अकालमा ज्या’न गएको हो ।
उच्च रक्तचापबाट पीडित बिरामीको नियमित औ’षधि सेवनबाट सुत्केरी गराउन हुने भनी डाक्टरकै सल्लाहमा बिहीबार राति ११ बजे अप्रेसन गरिएको थियो । अप्रेसन सफल भई पोस्टअप वार्डमा सुत्केरी राखिएको र एनआईसीयू बेड सरकारी अस्पतालमा नहुँदा बच्चालाई नारायणी सामुदायिक अस्पताल लगिएको स्त्रीरोग विभाग प्रमुख डा. सुनिलमणि पोखरेलले बताए । मुटुमा सहजरुपमा रक्तसञ्चार हुन नसक्दा सुत्केरीको निधन भएको उनको भनाइ छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपाकिला–११ तिरतिरे धारास्थित विपी राजमार्गमा आज बिहान यात्रुबाहक बसको ढोकाबाट खस्दा एक जनाको निधन भएको छ ।
कांकडभिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना ६ ख ९१३८ नम्बरको बसको ढोकाबाट खस्दा गम्भीर घाइते भई उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पठाइएकामा उपचारका क्रममा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले बताउनुभयो ।
पाल्पामा पहिरोले घर पुरिँदा पाँचजना बेपत्ता, विस्तृत विवरण आउन बाँकी